Ogaden News Agency (ONA) – Saraakiil iyo ciidankii maleesiyada Cabdi iley oo ku soo biiraya CWXO
Saraakiil iyo ciidankii maleesiyada Cabdi iley oo ku soo biiraya CWXO
Posted by ONA Admin	/ June 16, 2011
Waxaa ku soo biiray CWXO Ciidmo kala duwan oo ka tirsanaa maleesiyadii Hawaarin ay dadweynaha ula baxeen kuwaasoo ka soo kala galay aaggag kala duwan, iyagoo uu qalabkoodu u dhanyihiin.
Saraakiisha ka soo goosatay cadawga ee ku soo biiray halganka waxaa u dambeeyey kuwan hoos ku xusan:
1- Dhamme Faarax Cabdi Cismaan (sadex xidle) iyo ciidankiisiiba.
2- Xidigle Maxamed Axmed Aw Cismaaciil iyo Ciidiinkiisii.
3- Faa’iid Cabdi Muxumed iyo Ciidamo la socda.
Baxsiga Ciidanka cadawga ee Soomaalida ah iyo kuwa kalee laga soo qafaalay qawmiyadaha Itobiya dagga ayaa waxay sii kordheen muddooyinkan dambe, taas oo ay ugu wacantahay dagaalada xoogan ee ku socda iyo iyagoo u dulqaadan waayay dhibaatooyinka shacabka lagu hayo ee xasuuqa, kufsiga, dhaca, xidhagayga iyo jidhdilkaba leh oo sii kordhay. Dhibaatooyinka ay waayadan dambe ku hayeen maleesiyaadkan Cabdi iley uu qortay ayaa gaadhay heer halis ah oo ayna jirin wax lagu tilmaami karo haba yareetee.
Wariyaha sida qarsoon noogaga soo warama Jigjiga ayaa xaqiijiyay in baxsadka ciidmada hawaarinta markay badatay uu guumaysigu qaatay go’aan shacabka ka dhan ah kaasoo ah buu yidhi in halkii qof ee maleeshiyaankiisa hawaarinta ah ee ku dhinta dagaalka ay badelkeeda sida ugu dhakhsaha badan ugu badalaan mid ina adeerkii ah taasoon baryo ahayne si qasab ah lagu soo qabanayo. Waxay taasi walaac iyo oohin fara badan ku abuurtay waalidiintii shacabka Ogadenya iyadoo wal-wal iyo cabsi fara badana galisay dhalinyaradii.
Wuxuu intaa ku daray wariyuhu in kadib jabkii Galaalshe ay bilaabeen inay buuxiyaan meeshii ka banaanaatay maleeshiyadii si ay u ilaaliyaan mooraal daro aad u wayn oo la sood aristay maleeshiyada hawaarin kadib markay arkeen walaalaoodii iyo saaxiibadoodii shalay garabkooda ahaa oo caga-cagaf lagu aasayo waxay ku dhinteen iyo waxay ka dhinteen toonana uunan jirin.
Waxay CWXO balan ku qaadeen inay u aaro-gudayaan shacabka Soomaalida Ogadeniya iyagoo bilihii ugu dambeeyay casharo taariikhi oo aan hadhidoonin u dhigay maxaysatada sida qasabka ah lagu keeno goobaha dagaalka. Sidoo kale shacabka hagalamaya ee soomaaliada ayaa rumaysan in maalin dhow dambiileyaasha la horkeeni doono maxkamad caalami iyo mid wadani ahba.
ONA Ogadeniya 16-06-2011
mufakir islaamiy says:
allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waa arin lagu farxo walaalada kasoo laabtay daba joogsiga dabdhilfnimada ilaahay waxaan kabaryyaaynaa in aay kasoo wada laabtaan ooy shacbkooda wax laqabaan